Networks Social and Business Development
Ngokuba isikhathi eside, Sizama athi ukuhlanganisa pragmatic futhi kusekelwe models zezibalo phakathi zokuxhumana zenhlalo nokuthuthuka ibhizinisi ukuhlangabezana design Business Network kanye Osomabhizinisi, design ogama umgomo oyinhloko IEAGE.
Asazi namanje got a yokumodela ukuthi ngabe ukwanelisa, ngisho close. Amaphuzu Nokho eziningana ezithakazelisayo, lonke lolu cwaningo, benziwa ecacile kufanelekile ukuba kwabelwane nalabo abangase uthuthukisa ucwaningo efanayo, noma ngisho ubani enentshisekelo kulo magazini zokuxhumana kanye nethonya layo ibhizinisi imvelo.
Intuitively, Eminyakeni, Godu, Yebo ukuthabela nokuxhumana zokuxhumana nabantu kunenzuzo for osomabhizinisi amancane naphakathi. Konke uhlala ukuba afakazele lokhu mbono, izibalo ...
In izihloko oluzayo, Sizozama ukufinyeza ezinye amathemba namanje ukukhula ekuxhumaneni nomphakathi, Ithonya layo kungenzeka ezindaweni zomsebenzi hhayi kuphela ibhizinisi, futhi ukwethula ezinye izindawo amanethiwekhi kanye nobudlelwane phakathi izifundo ukuhwebelana phakathi kwamazwe kuya.
The uhlobo yokuxhumana osomabhizinisi akuyona ukudonselwa kanye imizila eyodwa noma eyodwa Facebook, Instagram, Twitter, njll. (zokuxhumana spectrum ezibanzi generic), kodwa ukwabelana izindawo eziningi ezifanayo zesakhiwo.
Umbono kungaba olubandlululayo kakhudlwana ukuba izimfanelo efana LinkedIn. In the umphakathi LinkedIn Igxila ukuxhumana professional futhi amaqembu, ngaphakathi inethiwekhi, izinkinga ezintweni ezivamile futhi ethize. Okungukuthi, sinawo Inethiwekhi ebanzi yophathina elithatha izingxenye ezahlukene (Izimboni) futhi amazinga professional, futhi kanyekanye sinawo izilinganiso eziningana lapho ukudingida izimpikiswano ngabanye futhi ligxile letsite isihloko kanye kuvinjelwe.
Izinzuzo, ngoba osomabhizinisi ezincane, kungaba zokuxhumana kanye exposure imikhiqizo yabo nemisebenzi ngezindleko eziphansi, noma mahhala. Godu, wawuzoba ukwanda Jomethri in the ematfuba, Esebenzisa lezi oxhumana kakade okubhekiswe (kanye focus efanayo nesithakazelo), vuka oxhumana ibhizinisi. Ngaphandle, isakhiwo onjalo, Ukwakha isihlangu noma ithonya Damping kwezomnotho / ngeni yezimali zangaphandle imvelo ibhizinisi osomabhizinisi amancane naphakathi nendawo.
Ngokuphathelene indawo yokugcina, kuba kuvisisa indlela lokhu kungase kungasebenzi isihlangu. Ukwenza segciwane ne ngokomzimba kwenethiwekhi (a internet) kukhona izifundo izindlela esibucayi noma okunye. Uma kukhona ukuxhumana ukwehluleka in ezinye izindlala network izindlela ngokushesha enye kuchazwa, Kungaba isimiso okulingana. Esinye isibonelo Isifaniso kungaba inethiwekhi kagesi uma ukwehluleka a wesifunda, kukhona izifunda ehlukile kwabangela ngokuzenzakalelayo ukuze kuhlangatshezwane nesidingo lesifunda. Ngakho, the osomabhizinisi inethiwekhi futhi babe yabo ehlukile oxhumana wesifunda futhi ukuthi imikhiqizo yayo ifuneka kanye nezinsiza.
Eceleni the nombono ibhizinisi kukhona omunye umbono ayisisekelo zamasu nokuthi kubalulekile ukuba ukucindezeleka. With the ukunwetshwa internet paradigms eziningana kolwazi, ukubaluleka kwalo futhi umongo walo, Bathi ziyashintsha. Akukona lula kangaka ukuba kudlule ulwazi ingamanga noma isimo uquqaba ukuba inqubomgomo imodeli intela noma izinkomba zezenhlalo kanye nezomnotho. Ulwazi ugeleza ngokukhululekile futhi ngokushesha yonkana inethiwekhi, lapho kuphoqa obala futhi waba nokwethenjelwa ukudalula ulwazi, ngoba lolu lwazi kweso ihlolwe, iphasise noma wagxeka izinkulungwane noma izigidi zabasebenzisi kunethiwekhi. Lokhu mbono abalwa isigwebo Gilles Lipovetsky, Sefilosofi French futhi isazi sezokuhlalisana kwabantu kulelo: "Inethiwekhi uthanda umphakathi endlalekile, more ezizimele yeningi, ezingqubuzana massification. "
The counterpoint kuya esigabeni esandulele kungaba ukuhlakanipha ngabanye kohlaziyo ukuhlola ulwazi futhi uzindle imvelaphi walo nezisekelo zalo. Ngakho kukhona lokhu kuqonda esekelwe, udinga ulwazi. Lokhu kungenye umsebenzi inethiwekhi ye osomabhizinisi, ukunikeza ebanzi isizinda solwazi in ukuze uvumele hhayi nje umbono imvelo olunzulu ukuthi kuhilela osomabhizinisi ezincane, njengoba futhi badalule amasiko, amasiko, imikhuba kanye nezindlela lula ukuthi ukuxhumana ezimakethe zomhlaba kanye zendawo.
Elinye iphuzu elibalulekile indawo. Indawo Bayanda is waphathisa ukubaluleka plan secondary, umongo kwembulunga yonke. Kuvamile ukuba ezinkampanini zamazwe group abasebenzayo bengenaso in the team ukwakheka izakhi lapho zitholakala ezikhungweni ezahlukene amaphuzu globe. Kuyinto futhi manje ovamile production globalized (Isibonelo: Imboni Izithuthi). It, Godu, Kuyinto kakade ezivamile ukuhlinzekwa kwezinsizakalo call centre (call centres) ngokomzimba akhiwe ezweni (explosio: India) ukuhlangabezana amakhasimende kwamanye amazwe.
Njengoba eliphezulu of the isitatimende odlule, sikholelwa ukuthi kwencazelo Marshallian of amahlukuzo wendawo (Amaqoqo noma amahlukuzo in English) ngizoya phansi umugqa ncazelo esisha 'namahlukuzo virtual ", okungukuthi, ukuthi njengoba zezithelo izinkampani emirarweni zomnotho ezifanayo akudingeki ukuba kuncike ukusondelana noma ubuhlobo obuqinile Izıhlabane wendawo. Lokhu lapho umnotho entsha kanye kwemvelo zokuxhumana ziyoba omunye amaphuzu kwabo ithonya.
Mayelana zokuxhumana kanye nokuthuthukiswa kwebhizinisi
The ukucabanga ngezansi ayesekelwe isihloko kusuka AT&T Cujo título é "The Business Imithelela of Social Networking" (1).
Abanye ezizathwini mayelana nezingosi zokuxhumana nabantu ngaphambi kokuba baxoxe nethonya layo ibhizinisi:
- Amathuluzi iyatholakala zandile uxhumano ikakhulukazi ematasa phakathi kwabantu. Nokho kukhona izifundo, okubala, Dunbar ukuthi inani ithi njengoba womuntu kungagcini ukuba azungeze 148 uxhumano (ubudlelwano) ozinzile. Ingabe kungenzeka ukuba ngisho cabanga ngalokhu nemikhawuko kubantu bendawo digital futhi ubuchwepheshe obusha?
- Inethiwekhi kungaba cishe izinyathelo eziyisithupha ukuxhumana ubani ixhunywe kwinethiwekhi. Okungukuthi, umuntu owazi wesithathu owazi ukuthi omunye ... ezingakuxhumanisa uthintene ngubani ofuna.
- Links umpofu (on the net) sakhele ngaphezu links eqinile. Okungukuthi, It iphetha ukuthi kuba lula ukuthuthukisa ibhizinisi value indalo nabantu abangenalo eqinile uxhumano isihlukene (ubuhlobo).
- Long Tail (Long umsila). Esikhundleni sokugxila imikhankaso ukuphumelelisa namathemba kwabantu umkhiqizo popular, kukhona imakethe efanayo for imikhiqizo ehlukahlukene ukuthi ukuhlangabezana niches ehlukahlukene market. Lona omunye imiqondo emisha komnotho entsha.
- Abomdabu Digital, okungukuthi, owazalwa internet, cell, kanye nobuchwepheshe lonke ikuyo yonke kuyatholakala. Umthelela lesi sizukulwane uyoletha emakethe, Uma kuziwa endabeni yokuziphatha, izidingo kanye nezifiso esizayo namanje in inqubo kwetinhlavu kanye kwemvelo.
Njengoba izinkampani izoshintsha, uma ufuna ukusinda kule umnotho entsha kanye nethonya zokuxhumana?
- Sinenkosi ukushintsha indlela yabo yokuxhumana, Bayoba sebenzisa multimedia, babe khona kwi net kanye nokuzivocavoca interactivity. Qala khona kwi net, ukuthuthukisa ukuxhumana, kuyoba ukubandakanywa bonke ababambiqhaza (ababambe iqhaza) ezenzweni yenkampani kanye nemiphumela futhi kuyoba zivame ukuba ukuziphatha (izenzo kanye umthwalo) ezivamile futhi esimeme ngokuhamba kwesikhathi.
- Izinkampani izoshintsha Umbono wakho, shintsha inhlangano yakho futhi ukuthuthukisa intelligence collective kanye iqhaza nabasebenzi, amakhasimende kanye nabaphakeli.
- Ubudlelwano inethiwekhi kuyoba Isici esiyinhloko ubuhle abasebenzi bayo njengoba kuyoba umthombo wokwaziswa ukuthuthukisa ulwazi kanye namakhono. Ukuhamba Functional kuzokhulisa kanye izisusa career functional ngeke ingashintshwa ukuze ngokoqobo entsha.
- Systems and ezokuxhumana ngeke ahlupheke ukuguquka kwezakhi zofuzo futhi uzivumelanise lezi zinguquko ngeke ihluke inkampani inkampani.
- Social networks kukhule inzuzo.
Ziyini izinselele ezihlobene nalezi zinguquko umongo izinkampani?
- Umqondo omusha ukubuya yokutjala (ROI) kufanele usetshenziswe. Ushintsho kuyoba lwezenhlalo more nombono for the Web 2.0, Kuyini "inetha" zokuxhumana, umoya ngokubambisana kanye nomphakathi kanye nokuthuthukiswa intelligence collective (orkut, facebook, youtube, Flickr, blogs, twitter, Wikis, njll).
- Nombono New iyini security futhi ukufeza ngaphandle ilimaza ekuxhumaneni naphakathi kanye nenkampani inter.
- Impahla Intellectual elinye iphuzu esibucayi. Ukusuka ngesikhathi eba intelligence ngokubambisana, njengoba, ngubani futhi yini kuyobuswa umthetho amalungelo kanye empahla.
- Ukwamukelwa amafilosofi entsha, ubuchwepheshe kanye Umbono abasebenzi. Kukhona Inertia futhi ukumelana ezintsha (ushintsho) zemvelo ukuze umuntu, ngoba lolu shintsho ngemuva yokungavikeleki ukungazinzi.
- Isitoreji amakhono nolwazi indawo bayoba izilungiselelo entsha, sokubheka ubungako kanye namasu.
- Interoperation kanye okwandayo izenzo ngokubambisana phakathi izinkampani, ntombazane kumakhasimende nabaphakeli ukwakha umthamo enkudlwana amacala kanye exchange of imiyalezo nolwazi ukuthi kufanele sikwazi futhi silalele nezinqubomgomo ukuqinisekiswa ngaphandle kokushintsha amazinga nokuvikeleka of yangaphakathi nangaphandle nezokuxhumana ibhizinisi.
- Speed ​​luyisici esiyinhloko. Endabeni Ac sihloko&T, ukubhekisela ufaniswa ukuthuthukiswa isikhathi isicelo kanye ukuvuthwa yayo isigaba. Nokho, kwelulwa noma spectrum, ukuthuthukiswa yimuphi umkhiqizo noma insizakalo, kanye lokulungiswa amathuluzi izinkampani ukusebenzisa ukuthuthukisa amabhizinisi abo kuyodingeka ukuba olusha (njengoba) ngesikhathi irekhodi, okuholela isidingo kabusha izinqubo ukuhlolela ubungozi kanye kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha.
- Zabasebenzi Ukwanda ukuhamba Kuzoba inselele izinkampani mayelana nokulondoloza enhlokodolobha obuhlakani inkampani.
- Indlela wasithatha value ngokusebenzisa ukwamukelwa zokuxhumana Kuzoba inselele. Ibhalansi ezibunile phakathi ekuphatheni imisebenzi kanye ekuxhumaneni wathumba value hhayi extrapolate imikhawulo hhayi ukungena emkhakheni ilungelo langasese kanye nokuqapha / kulalela (explosio: Big Brother) Kuyoba elinye iphuzu esibucayi.
(1) - Available in: http://blog.earlystrategies.com/wp-content/uploads/2010/02/WP-soc_17172_V02_10-16.pdf
← Umqondo Ukuhwebelana Kwembulunga Yonke
Ukuhwebelana kwembulunga yonke, Amathrendi izifundo →